‘स्वदेशमै बनेका सफ्टवेयर प्रवद्र्धन गर्नु पहिलो जोड हो’ - Living with ICT
Home / CAN SofTech 2014 / ‘स्वदेशमै बनेका सफ्टवेयर प्रवद्र्धन गर्नु पहिलो जोड हो’
‘स्वदेशमै बनेका सफ्टवेयर प्रवद्र्धन गर्नु पहिलो जोड हो’
Shiva Basnet Sep 10, 2014	Leaveacomment
महासचिव, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)
सातौ क्यान सफ्टेक २०१४ को आयोजना कसरी हुँदैछ ?
नेपालको सफ्टवेयर क्षेत्रका लागि सफ्टेक महत्वपूर्ण चाड हो । अघिल्ला ६ संस्करणको सफल आयोजनाले समेत सफ्टेकको औचित्य पुष्टि गरेको छ । गतवर्षदेखि सफ्टवेयरलाई मात्रै जोड नदिई सर्भिसेस र सोलुसन क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिए पछि सफ्टेकले इन्फोटेककै हारहारीमा ब्राण्ड कमाएको छ । यसपटक सफ्टवेयर, कम्प्युटर एजुकेशन, कम्प्युटर सेक्युरिटी, इन्फर्मेशन म्यानेज्मेन्ट लगायतका सफ्टवेयर प्रदर्शनी हुनेछन् । त्यस्तै सेवा क्षेत्रमा इन्टरनेट, केबल तथा टेलिभिजन सम्बन्धी सेवा रहने छन् । सोलुसन क्षेत्रमा सेक्युरिटी, वायरलेश, प्रिन्टिङलगायतका सोलुसन र एप्स प्रदर्शन गरिनेछ ।
विगतका सफ्टेकभन्दा कसरी फरक हुनेछ ?
यसअघिका सफ्टेकमा कमी महशुश भएका विषय अहिले समेटेका छौं । स्वदेशमै बनेका उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नु पहिलो जोड हुनेछ । साथै, समग्र सफ्टवेयर क्षेत्रको उत्थानका लागि सेमिनार, अन्तक्रियाका कार्यक्रम तय भएका छन् । विस्तारै नेपाल पनि सफ्टवेयरको गन्तव्य बन्दै गएको छ । त्यसैले, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नियोगले निकै महत्वका साथ सफ्टेकलाई हेरेको पाएका छौं ।
सफ्टवेयरको क्षेत्र गन्तव्य बनिरहेको कुरा गर्नुभयो । तर, क्यानको सफ्टेकमा प्रायोजकदेखि सहभागी कम्पनी गैर सफ्टवेयर क्षेत्रकै हावी बनिरहेका छन् नि ?
यसलाई गैरसफ्टवेयर क्षेत्र भन्न मिल्दैन । सर्भिसेस र सोलुसन पनि सफ्टवेयरकै इन्टिग्रेटेड पार्ट हुन् । उपभोक्ताले यि तीन वटै कुरा एउटै थलोबाट पाउन सकुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । जुन सहि थियो भन्ने कुरा पोहोरको सफ्टेकले प्रमाणित गरिसकेको छ । र, प्रायोजकको सन्दर्भमा क्यानले आफ्ना इभेन्टको प्रायोजनका लागि बन्डलिङ सिस्टम ल्याएकाले सबै इभेन्टमा एकै कम्पनीलाई स्थान दिइएको हो ।
सफ्टेकमा जिल्लाका उत्कृष्ट प्रोजेक्टलाई पनि स्थान दिने भन्नुभएको थियो नि ?
हो । सफ्टेकले काठमाडौंका सिमित कम्पनी र तिनका उत्पादनलाई मात्र समावेश गर्नुहुदैन भनेर जिल्लाका उत्कृष्ट प्रोजेक्टलाई निशुल्क स्टल दिने निर्णय गरेका हौं । त्यस्ता प्राजेक्टलाई जिल्ला क्यानले क्षेत्रीय क्यानमा र क्षेत्रीय क्यानले हामीसामु सिफारिस गर्छ ।
कलेजका प्रोजेक्टलाई पनि प्रदर्शनीमा राखिनेछ ?
क्यानले प्रत्यक विश्वविद्यालयका लागि निशुल्क स्टल दिदै आएको छ । साथै विद्यार्थीद्धारा निर्माण गरिएका सफ्टवेयर, एप्स प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम पनि सफ्टेक नै भएकाले थप कलेज सहभागी हुने अवसर पनि छ ।
सफ्टेक २०१४ ले दिने सन्देश के हो ?
हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं, नेपाल सफ्टवेयर, बिपिओ र आउटसोर्सिङको केन्द्र बन्नुपर्छ र बन्न सक्छ पनि । यसका लागि बिजनेश वातावरण तयार हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट क्यानले सधैं पहल गर्दै आएको छ । सफ्टेकले यहाँको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म चिनाउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालमा उर्जाशील युवा छन् । यहाँ नलेजबेस्ड इन्ड्रष्टीको सम्भावना छ भनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश पुर्‍याउनु हाम्रो जोड हो ।
नेपालको सफ्टवेयर क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन क्यानले केके गर्दै छ ?
तत्कालै गर्नुपर्ने काम आइटी कम्पनीहरुको स्टान्डर्ड हो । यहाँको कम्पनीहरुको अभिलेखा कसैले राखेको छैन । क्यानले हार्डवेयर कम्पनीको डाटा सर्भे गर्ने काम सक्यो भने भर्खरै सफ्टवेयर कम्पनीको सर्भे सुरु गरेको छ । त्यस्तै जाइकासँग मिलेर अफसोर पोर्टल बनाउँदै छौं । । यो पोर्टलले नेपाली कम्पनीलाई आउटसोर्सको काम दिन सहयोग पुर्‍याउने छ । अर्को कुरा, स्किलफुल हुमन रिसोर्स निर्माणका लागि विश्वव्यापी मान्य हुने इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ एक्जाम (आईटिइई)को व्यवस्था गर्दैछौं । यो मात्रै नभई नेपाली कम्पनीरुले ग्लोबल शर्टिफिकेट कसरी पाउने भनेर तालिम दिने योजना पनि ल्याइरहेका छौं ।
(प्रस्तुत अन्तवार्ता भदौं अंकको लिभिङ विथ आइसिटीमा प्रकाशित छ)
‘स्वदेशमै बनेका सफ्टवेयर प्रवद्र्धन गर्नु पहिलो जोड हो’ Amrit Panta shiva basnet 2014-09-10
Previous एप्पलले सार्वजनिक गर्‍यो एप्पल वाच, आइफोन सिक्स र एप्पल पे
Next सातौ संस्करणको ‘सुबिसु क्यान सफ्टेक २०१४’ सुरु
कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको आयोजनामा हुन लागेको दोस्रो संस्करणको सुबिसु क्यान कमटेक २०१७ को …
दिगम्बर झा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । २०६९ मंसिर …